Calistoga's Dr.Wilkinson's Backyard Resort & Mineral Springs anovhurwa mushure mekugadziriswa kwemamirioni-emadhora
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » Calistoga's Dr.Wilkinson's Backyard Resort & Mineral Springs anovhurwa mushure mekugadziriswa kwemamirioni-emadhora
tsika nemagariro • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Investments • Musangano Weindasitiri Nhau • nhau • Kuvakazve • Resorts • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Calistoga's Dr.Wilkinson's Backyard Resort & Mineral Springs
Chartres Lodging Group iri kufara kuzivisa kuti Calistoga's inozivikanwa geothermal spa, Dr. Wilkinson's Backyard Resort & Mineral Springs, ikozvino yakavhurika uye inogamuchira vaenzi zvakare. Chiziviso chinovhara kuvhara kwegore rese kwenzvimbo inozivikanwa yepasirese uye kugadziridzwa kwakazara nemakambani anozivikanwa ekugadzira SB Architects uye EDG Dhizaini.
Chiitiko chingango fungidzirwa chinosanganisira kutanga kweyekudyira bhizimusi, Imba yeNani.
Vaenzi vachafadzwa nemakamuri evaenzi akagadzirwazve uye nekugadziridzwa kwenzvimbo dzinozivikanwa dzekugezera madhaka uye emvura matsime spa.
Iyi iconic spa yakwezva vanotsvaga vehutano kubva kutenderera pasirese kune ayo ekuvandudza emadhaka ekugezera uye nekuporesa mvura kwemakumi manomwe emakore.
Iyo nyowani iteration yeiyo iconic resort, yakavambwa muna 1952 nemupiyona wehutano hwezvehutano John "Doc" Wilkinson nemukadzi wake, Edy, inosanganisira kuwedzera kwekudyira kwekudyira, Imba yeZvirinani, inonakidza inovandudzwa dzimba dzevaeni, uye kunyatso kugadzirisa Spa zvivakwa.
Iyo iconic spa yekuenda pamugwagwa mukuru waCalistoga, unonzwisisika zviri nyore neayo yekutanga neon chiratidzo uye yechinyakare 1952 Buick Special yakamiswa pamharadzano, yakwezva vanotsvaga hutano kubva kutenderera pasirese kune ayo ekuvandudza matope ekugeza uye ekuporesa mvura kwemakumi manomwe emakore. Kugadziriswa kwenzvimbo yekutandarira kunokudza nhoroondo yakaganhurirwa yeiyo chivakwa ichipa ruzivo rwazvino chose. Inoratidzira nyowani yepakati-pezana-ramakore-rakafemerwa dhizaini, makumi mashanu akagadziridzwa emakamuri evaeni, matatu geothermal emadziva emadziva, nzvimbo yekudyira nyowani ine nzvimbo yekudyira yekunze yekunze, uye nzvimbo yekufungidzira, Dr. Wilkinson's, kupfuura nakare kose, nzvimbo inosangana nehutano mufaro.
Iyo itsva resort inopa musanganiswa wemhando dzemakamuri evaeni, kusanganisira yakamira yega, imwe-yekurara bungalow; matatu Spa Cottages ane clawfoot machubhu ekunyorova; imba yePeloton yevafambi vane pfungwa dzakanaka. uye yakadzoreredzwa, -makamuri mashanu, 1924-mazambiringa Victorian bunkhouse anorara gumi nemashanu, akakodzera kufamba kweboka uye kudzoka. Iyo yekugadziridza inocheka mune yekutamba yakasangana yekubata mapoinzi mukati mese, kusanganisira nepamusana pehuswa nzvimbo yemitambo uye kupikicha, uye retro-yakafemerwa yekutandarira ine inoisa nyowani yekumisikidza mvura kuisirwa uye zvakasiyana siyana zvemuno apothecary zvigadzirwa. Zvirongwa zvepa-saiti zvinosanganisira kumashure kwemitambo yePinot & Pétanque, hwaWilk hwaWine Husiku sechikamu cheKushanyira Chishanu cheChishanu cheCalistoga, uye zvipo zvinopa hutano.
"Sezvatakatanga kugadziridza uku, chimwe chezvinangwa zvedu zvakakosha chaive chekuchengetedza mweya weichi chivakwa uye kuremekedza kuzvipira kwenguva refu kunzvimbo yekugara uye mufaro," akadaro Robert Kline, CEO & mubatsiri weChartres Lodging Group. “Tinodada nekuve vatariri veDr Wilkinson's Backyard Resort & Mineral Springs nevamiriri vekumutsiridzwa kwayo. Tinovimba nzvimbo yedu yekutandarira ichapa kurudziro uye inofemerwa yekufemerwa kune veko nevashanyi kuti vagare zvakanaka, kunyangwe izvi zvichireva kunakidzwa nezuva rakazara rekurapa kurapa pa spa yedu kana kungova negirazi rewaini, chidimbu chepayi, uye mutambo wekubb patsangadzi yedu. ”
Mid-Century, Yakagadziriswa - Iyo Dhizaini
Nekusimbisa kwekuchengetedza zvivakwa zvekare uye kuremekedza kutendeseka kwenhaka nenhaka, SB Architects yakatungamira kugadziridza kwekunze kwepfuma, kudzoreredza zvivakwa zvitatu zveVictorian, kutarisisa iyo yakawedzera pfuma yezvivakwa, uye kuvhura nzvimbo dzeveruzhinji panze. EDG Dhizaini yakatungamira kugadziridzwa kwemukati, yakafemerwa neyemazuva ano kutora yepakati-pezana ramakore. Iyo airy, inogadziriswazve yekutandarira ndeye retro-ne-a-twist, iine hunyanzvi hwekuisirwa makumi mashanu nemaviri evhu dhisiki kuseri kwedhesiki-rekutarisa (kugunun'una kune gore rekutanga rehotera) neshongwe yemvura inopemberera tsika refu yaCalistoga yekuzorodza vafambi ayo ane mineral-akapfuma echisipiti mvura.
Iyo spa inoratidzira nyowani uye inodzikamisa palette nemabatiro e terra cotta yechinhu chepasi, nepo dzimba dzevaeni dzichiratidzira magadzirirwo ayo anoteerera kudzoka kuma1950 maitiro, ane epakutanga mabhuru emadziro akazorodzwa neakajeka, chena pendi, chena oak pasi, uye inodziya pendi pendi. . Kamuri yevaeni inosimudzira inosanganisira yemuno inogadzirwa hunyanzvi, imwe-ye-iyo-mhando zvigadzirwa zvehari zvakagadzirwa nema ceramics studio studio NBC Pottery, uye mepu yakajeka yenzvimbo, kukurudzira vashanyi kuti vaongorore guta rinoyevedza reCalistoga. Akarongedzwa hunyanzvi munzvimbo yese inosimbisa maartist emuno, uye mifananidzo yakafuridzirwa naEmy Wilkinson anodiwa mosaics anovandudza iyo spa.
"Kugadziridza nzvimbo inochengeterwa hutano hwakanaka kuti ifananidze tarisiro yevafambi vemazuvano rave dambudziko rinonakidza. Dhizaini yedu yekuratidzira inobvuma makumi manomwe emakore enhoroondo yekupayona ichigadzira nzvimbo yekumashure inokudzorera kumashure kune zvakaitika kwauri uye zviroto zvekutsvaga kwevana, "akadaro Maki Nakamura Bara, mubatsiri weChartres Lodging Group. “Takagadzira nzvimbo dzekutandara pamwe nenzvimbo dzekutandara. Uye isu takagadzira yekudyira iyo inogutsa uye inotambanudza mukanwa wako usingatambanudze chiuno chako. Hop pane famba, tandara padziva kana kunyura pasi penyeredzi - ino inzvimbo yekuzorora nekuwana zvekare. "
Imba Yezviri nani - Iyo Yekudyira
Imba Yezvakanaka ndiyo nzvimbo yekutandarira nyowani-yekudyira uye bhawa naTrevor Logan weSan Francisco's Green Chile Kicheni uye neSonoma-yakavakirwa Chile Pies Baking Co Yakafuridzirwa nenguva yaLogan muNew Mexico uye kumashure kwake mune hutano nekudya kunovaka muviri, Imba Yekunaka inoratidzira chikafu chekuSouthwestern-chakafemerwa nechikafu chinovaka. Kupa muyero pakati pazvino California nyaradzo chikafu uye zvine hutano sarudzo, menyu inosanganisa fibrous uye Vitamin C yakawedzera green chiles mune echinyakare New Mexican ndiro, senge green chile stew uye zvine hutano dhiini protein booster ndiro.
Zvakare pane iyo menyu kune ezuva nezuva matsva-akabikwa mapai kubva kuChile Pies Baking Co, kusanganisira yavo inozivikanwa girini chile apple pie ine cheddar crust, walnut streusel topping uye zvishoma zvinonhuwira chili glaze. Iyo yakasimba yezvinwiwa menyu inotarisana nehutano, ichipa zvinwiwa zvakaviriswa uye adaptogenic howa tii, pamwe neakarongedzwa rondedzero yemuno mawaini nedoro pombi. Imba Yezviri nani inokurudzira vanodya kuti vadye kunze, ona huni-yakaburitswa pamusoro uye chili roaster muchiito, uye shandisa zvakazara iro rakakura rakafukidzwa patio uye kumashure nzvimbo yehuswa.
Kudya kwemanheru iri China kusvika Svondo kubva na5 pm kusvika 10 pm nebrunch brunch Mugovera neSvondo dzese na9 am kusvika na2 pm Menyu yakakwana inowanikwa pano.
Iyo Yakafanana Nguva-Inokudzwa Marapirwo, NeKumonyoroka - Iyo Spa
Iyo Spa kuDr.Wilkinson's Backyard Resort & Mineral Springs inoramba iri yekukwezva kukuru kwenzvimbo yekutandarira, ichipa imwecheteyo inozivikanwa pasi rese, mamineral-akapfuma matope ekushambidza uye yakavanzika-fomula yemasanganiswa musanganiswa we organic, yemuno Calistoga volcanic ash yakagadziridzwa naDoc Wilkinson anenge Makore 70 apfuura. Iyo yekufungidzira spa chiitiko, chakagadzirwa neTLEE Spas, inokwevera pane zvakasikwa magumo, materu epasi, matanda emisidhari, uye zvishandiswazve matanda eforcelain kuti vagadzire yakaenzana chiyero chekuzorora uye kumutsidzira. Iyo spa inoratidzira mana akagadziridzwa zvakakwana emakamuri emasaji, nyowani nyowani yekunze spa gadheni yezve al fresco kurapwa, ina emukati matope ekugezera, manomwe mukati uye maviri ekunze emaminetsi ekugezera, inotonhora mafashama shawa, uye yakatsaurirwa geothermal mineral dziva rizere nekudzikamisa, akasiyana tembiricha mvura. yakatorwa kubva kuCalistoga epanyama matsime ekuporesa.
Dr Wilkinson akasarudzika mamineral emvura akaongororwa neBalneology Association yeNorth America (BANA), inotungamira yekurapa yekugezesa uye matsime ekurapa, uye anoiswa seanosiyanisa, asina simba, achienzanisa mvura nekwanisi yekusimbisa ganda, kuenzanisa periipheral huta hurongwa, gadzirisazve dzakasimbisa tsinga masisitimu, hydrate, uye detoxify. Kurapa kwakakosha kunosanganisira Iyo Mabasa, inoratidzira Dr.Wilkinson ane mukurumbira wekushambidza matope kurapwa, kumeso kumeso, kunhuhwirira kwemamineral whirlpool bath, imba yemhepo, gumbeze kuputira, uye maminetsi makumi matatu-maminitsi; iyo Muviri Bira, iine mineral whirlpool yekugezwa kurapwa nemahops matsva, yakaoma ale mbiriso, chimera, bhari, uye doro remuno padivi; uye yemaminetsi makumi matatu kurira kurapa kurapa kwakagadzirirwa kuwana muyero wekuzorora uye kumutsidzira. Iyo yakazara yekurapa menyu inogona kuwanikwa pano.
Kuti udzidze zvakawanda uye kubhuka kuchengetera, ndapota shanya www.vatuela.com.
Nezve Dr. Wilkinson's Backyard Resort & Mineral Springs
Dr.Wilkinson's Backyard Resort & Mineral Springs inzvimbo inoshamisira uye yeku spa iri mukati memwoyo weguta rinoyevedza reCalistoga, rakavakirwa muNapa Valley. Yakavambwa muna 1952 nenyanzvi dzekupayona dzehutano "Doc" naEdy Wilkinson, nzvimbo yekutandarira iyi yave nzvimbo yekutandara inozivikanwa pasi rese, ichipa nguva yekuremerwa matope ekugezesa uye marapiro epa spa, kurapa mamineral seseji, uye akanakisa eCalistoga kunze kwemikova . Ichitevera kugadziridzwa kwakakwana, kwepamusoro-kusvika-pasi, iyo yakashandurwa nzvimbo yekuremekedza inokudza yayo iconic yakapfuura ichitarisa kune ramangwana neiyo nyowani yepakati-pezana-ramakore-rakafemerwa dhizaini, makumi mashanu akazororwazve dzimba dzevaeni, resitorendi nyowani ine zvigaro zvemukati nekunze, spa inofungidzirwa , uye zvimwechetezvo zvakaoneswa matope ekurapa ekutanga akagovaniswa nenyika makore anoda kusvika makumi manomwe apfuura.
Nezve Chartres Lodging Boka
Iyo Chartres Lodging Group, LLC, inzvimbo yekuraira uye yekudyara yakanangana nekutenga, manejimendi manejimendi, kugadzirisa uye kuvandudza dzimba dzekugara. Yakatangwa muna 2002, kambani yakapedza mari inodarika madhora zviuru mazana matatu nemazana matanhatu emazana emazana emahotera kuUnited States, iine mari yekuwedzera muJapan, uye yanga ichitarisira dzimba dzemakamuri emahotera dzinopfuura 3.6. Iyo kambani inotungamirwa muSan Francisco ine mamwe mahofisi muNew York neLos Angeles.
Nezve Sightline Kugamuchira Vaeni
San Francisco-based Sightline Hospitality inounza pamwechete vanhu, nzvimbo, uye mikana yekutsanangudza zvakare manejimendi manejimendi. Sightline yakadzika midzi mukugadzira mweya inogara iyo inoita fungidziro kwenguva refu mushure mekubva. Kunyangwe uchishanda padanho repasirese kana nemahotera akazvimiririra, kunze kwebhokisi kufunga uye manejimendi manejimendi manejimendi inobvumira Sightline kuenderera mberi nekugadzira ruzivo rwekufamba kwemakumi emakore anouya
Nezve EDG Dhizaini
Akatungamirwa muSan Francisco Bay Area nemahofisi muDallas neSingapore, EDG yakagadzira zvine hungwaru dhizaini mhinduro muresitorendi uye indasitiri yekugamuchira vaenzi kweanopfuura makore makumi matatu. Nehunyanzvi hwekumaka, zano uye dhizaini, EDG inopa chaiyo nyaya nesimba rekushandura nzvimbo nekugadzira kukosha kwevaridzi nevashandisi. EDG parizvino iri kuita nemahotera akazvimiririra, nzvimbo dzekutandarira, uye nzvimbo dzekudyira kutenderera pasirese.
Nezve SB Architects
Kupemberera yayo 60th Anniversary muna 2020, SB Architects yakagadzira mukurumbira wepasirese wemagadzirirwo mhinduro akaumbwa nehunhu hwesaiti. Iyo femu yakawedzera hutungamiriri hwayo mukugamuchira vaeni, pekugara nekusanganisa-kushandiswa munyika makumi matatu uye mumakondinendi mana, iine tsika yekudyidzana uye nechikwata chakasimba chevanhu vane shungu vanotyaira nhaka yekambani uye shanduko inoenderera. Kubva payakatanga mutsika yekugara muna 30, SB Architects yakakoshesa kugara pachokwadi kune saiti uye kugadzira yakasimba nzvimbo yenzvimbo inowirirana nevashanyi, vashanyi, uye vagari padanho repamoyo. Sezvo ichiri kuenderera mberi nekuwedzera kwehunyanzvi uye yayo portfolio inoratidza yakatowanda geographic misiyano, iyo femu inosimudza mweya wayo wezvemabhizimusi neyakagadzirwa dhizaini kuti vafunge kubatanidza vanhu kune mumwe nemumwe uye kune anoyevedza zviitiko zveinosaina nzvimbo. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve SB Architects uye yepasirese mukurumbira wekugona kwavakavaka mukuronga uye dhizaini yemapurojekiti pasirese, shanya www.sb-architects.com.